१०५ प्रतिशत संस्थापक हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि एभेरेस्ट इन्स्योरेन्स पुग्यो बोर्ड; यसरी पुर्याउदै छ पुँजी ? – Insurance Khabar
१०५ प्रतिशत संस्थापक हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि एभेरेस्ट इन्स्योरेन्स पुग्यो बोर्ड; यसरी पुर्याउदै छ पुँजी ?
प्रकाशित मिति : २८ असार २०७५, बिहीबार ०५:४७
इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौँ: एभेरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक समूहको १०५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। कम्पनीमा ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर कायम राख्न कम्पनीले पब्लिक शेयर धनीलाईपनि संस्थापक तर्फको हकप्रद शेयर खरिद गराउने छ।
कम्पनीको अहिलेको पुँजी १३ करोड छ। १०५ प्रतिशत हकप्रद शेयर सबै संस्थापक समूह तर्फको हुने छ। १०५ प्रतिशत हकप्रद पछि कम्पनीको पुँजी २७ करोड पुग्ने छ। अब चाही संस्थापक र साधारण शेयर धनीको हिस्सा अनुपात ५१ : ४९ हुने छ।
अहिलेको हकप्रद प्रक्रिया पश्चात् कम्पनीले फेरी ३०० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने छ। ३०० प्रतिशत हकप्रद पछि कम्पनीको पुँजी १ अर्ब नाघ्ने छ। बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई १ अर्ब पुँजीको लक्ष्य दिएको थियो।